စည်းကမ်းချက်များ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ သီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်ကွတ်ကီးပေါ်လစီများလိုအပ်ပါသလား။ | Martech Zone
စည်းကမ်းချက်များ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ သီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်ကွတ်ကီးပေါ်လစီများလိုအပ်ပါသလား။
တနင်္ဂနွေ, Aprilပြီ 30, 2017 တနင်္လာနေ့, မေလ 1, 2017 အလက်ဇန္ Isenegger
ဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာဆက်ဆံမှုများသည်အမြဲတစေလက်ချင်းချိတ်။ သွားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာများ၊ တက်ဘလက်များသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းဖုန်းများတွင်ဖြစ်စေအွန်လိုင်းထုတ်ကုန်များအသုံးပြုမှုတိုးများလာခြင်းနှင့်အတူဤအချက်သည်ယခင်ကထက်ယခု ပို၍ မှန်ကန်လာသည်။ သတင်းအချက်အလက်အသစ်များကိုချက်ချင်းလက်လှမ်းမီမှုကြောင့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုပိုမိုကျယ်ပြန့်သောစျေးကွက်သို့ပို့ဆောင်ရန်အတွက်အဓိကကိရိယာတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
၀ က်ဘ်ဆိုက်များသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးပြီးခလုတ်တစ်ချက် နှိပ်၍ အသစ်နှင့်ရှိပြီးသားစားသုံးသူများ၏ရောက်ရှိရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဒီဂျစ်တယ်နယ်ပယ်တွင်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအဆင့်မြင့်မားမှုကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ သူတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ရာတွင်အမြဲတမ်းသတိရှိရန်လိုအပ်သည်။ စားသုံးသူကာကွယ်ရေးသည်လည်းအတူတူပင်အရေးကြီးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းလုပ်ဆောင်မှုများတွင်မှတ်ပုံတင်လိမ်လည်မှုခြိမ်းခြောက်မှုရှိနေသော်လည်း ၀ က်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုသူများ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုလည်းကာကွယ်ရမည်။
လုံခြုံရေးနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုအကြားအပေးအယူလုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ငါနည်းပညာကျွန်တော်တို့ကိုနှစ် ဦး စလုံးရှိသည်နိုင်စွမ်းပေးသည်ထင်ပါတယ်။ ယောဟနျသ Poindexter
သင်၏လုပ်ငန်းကိုကာကွယ်ခြင်း - အသုံးပြုမှုစည်းမျဉ်းများနှင့်အခြေအနေများ
ဝက်ဘ်ဆိုက်အများစု၏ပင်မစာမျက်နှာများသည်လူသိများသောအရာကိုပြလိမ့်မည် သတ်မှတ်ချက်များ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပိုင်ရှင်များနှင့်၎င်း၏အသုံးပြုသူများအကြားစာချုပ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောဝေါဟာရများပုံမှန်အားဖြင့်ပါဝင်သည်:
အဆိုပါ အခွင့်အရေးနှင့်တာဝန်ဝတ္တရား site ၏ပိုင်ရှင်များနှင့်အသုံးပြုသူများအကြား
၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုမည်သည့်အချိန်တွင် ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်
မည်သည့် တာဝန်ဝတ္တရား ပြproblemsနာများပေါ်ပေါက်လာပါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပေါ်ပေါက်လာနိုင်သည်
ထိုကဲ့သို့သော T & C များရှိခြင်းသည်တင်းကြပ်သောဥပဒေရေးရာလိုအပ်ချက်မဟုတ်သော်လည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားအကောင်းဆုံးအကာအကွယ်ပေးနိုင်ရန်ထိုဝေါဟာရများကိုထည့်သွင်းခြင်းသည်အကျိုးရှိသည်။ ကုသခြင်းထက်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုလုပ်ကိုင်သည့်အယူအဆတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် T & C များပါ ၀ င်မှုသည်စီးပွားဖြစ်နှင့်လက်တွေ့ကျသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်အထောက်အကူဖြစ်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ဆိုက်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်သည်အသုံးပြုသူအားအလွဲသုံးစားပြုခြင်းနှင့်မဖွင့်နိုင် (ဥပမာ - ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲပါဝင်သောအကြောင်းအရာများကိုတင်ခြင်းနှင့်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း) ။
T & C ပါ ၀ င်မှုသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်တာဝန်ယူမှုကိုကန့်သတ်ရန်ဆောင်ရွက်သည်။ ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြထားသောစည်းကမ်းချက်များသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဆိုးဆိုးရွားရွားအခြေအနေမျိုးတွင်တရားရုံးတွင်အရေးယူလိုသူများအတွက်တားဆီးနိုင်သည်။
အသုံးပြုမှုစည်းကမ်းချက်များထားရှိခြင်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုသူများအတွက်ရှင်းလင်းပြတ်သားစေသည်။ နှစ်ဖက်စလုံးမှရရှိသောမည်သည့်အခွင့်အရေးနှင့်တာ ၀ န်ကိုမဆိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားပြီး၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
သင်၏သုံးစွဲသူများ၏အချက်အလက်များကိုကာကွယ်ခြင်း - ကွတ်ကီးနှင့်သီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒ
စီးပွားရေးဆိုဒ်များ၊ အထူးသဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ ၀ ယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ရောင်းချခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သော ၀ န်ဆောင်မှုများသည်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုကောက်ယူရန်လိုသည်။ ဤပုဂ္ဂလိကသတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းမှုသည်ရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသောသီးသန့်တည်ရှိမှုပေါ်လစီကိုလိုအပ်သည် သတ်မှတ်ချက်များ သဘောတူညီချက်) ကိုဥပဒေအရလိုအပ်သည်။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်မူဝါဒသည်အသုံးပြုသူများအားအချက်အလက်ကာကွယ်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုအသိပေးသည်။ အသုံးပြုသူများ၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုအသုံးပြုရာတွင်ထည့်သွင်းမည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကမည်သို့ကိုင်တွယ်သည်ဆိုသည့်မူဝါဒတွင်မူဝါဒတွင်ပါ ၀ င်သည်။ အောက်မှာ အီးယူအချက်အလက်ကာကွယ်ရေးစည်းမျဉ်းများ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုသည်ဖောက်သည်၏အမည်၊ လိပ်စာ၊ မွေးသက္ကရာဇ်၊ ငွေပေးချေမှုအသေးစိတ်များအပါအဝင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုစုဆောင်းမိလျှင်ပေါ်လစီတစ်ခုထားရှိရမည်။
Cookies များသည်ဖောက်သည်များ ၀ ဘ်ဆိုဒ်အသုံးပြုမှုကိုစောင့်ကြည့်ရန်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏ကြိုက်နှစ်သက်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ သုံးစွဲသူ၏အတွေ့အကြုံကိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်နှင့်တိုးတက်အောင်လုပ်သည်။ အကယ်၍ visit ည့်သည်အသုံးပြုမှုကိုအောက်ပါအချက်များနှင့်ကိုက်ညီခြင်းအပြင်ဤနည်းဖြင့်တိုင်းတာပါကဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်လုံလောက်သောမူဝါဒပါဝင်ရမည်။
cookies များကို present ည့်သည်များအားအသိပေးခြင်း
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်၎င်းတို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များတွင်ပွင့်လင်းမြင်သာသောအချက်အလက်မူဝါဒရှိခြင်းအတွက်စီးပွားဖြစ်အကျိုးကျေးဇူးရှိသည်။
လုံလောက်သောသီးသန့်တည်ရှိမှုမူဝါဒမရှိခြင်းသည်စည်းမျဉ်းများကိုချိုးဖောက်သည် ဒေတာကာကွယ်မှုအက်ဥပဒေ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ဖောက်ဖျက်မှုအတွက်ကြီးမားသောဒဏ်ငွေအဖြစ်£ 500,000 အထိရနိုင်သည်။
၀ က်ဘ်သို့ရောက်သောအခါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ဆိုက် visitors ည့်သည်များအတွက်သော့သည်ဖြစ်သည် ပထမဦးဆုံးအဘေးကင်းလုံခြုံရေး! စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ သီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်ကွတ်ကီးမူဝါဒများနှစ်ခုလုံးသည်ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုနှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရန်ရည်ရွယ်သည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုမှာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည် ပြန်ကြားရေးကော်မရှင်နာရုံး.
Tags: cookie ကိုမူဝါဒကဒေတာကာကွယ်မှုလုပ်ရပ်ပြန်ကြားရေးကော်မရှင်နာရုံးဥပဒေရေးရာကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခွအေနအသုံးပြုမှု၏စည်းကမ်းချက်များသတ်မှတ်ချက်များ
အလက်ဇန္ဒရား၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖြစ်သည် မင်္ဂလာပါ။ စတင်ထူထောင်သူများသည်ခိုင်မာသည့်တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်ပြီးရှေ့နေများကအရူးနှုန်းထားများကိုကောက်ခံသည်။ Linkilaw သည်စွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ကျမှုကိုရပ်တန့်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာ၊ အိမ်တွင်းဖြေရှင်းမှုများနှင့်ဥပဒေရေးရာစျေးကွက်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် Pre-Series B ၏စတင်မှုများကိုအစဉ်အမြဲအကြီးမားဆုံးတရားဝင်အထောက်အပံ့ဖြင့်ပေးသည်။